China na emeputa PVC uwe aka na emeputa | Zhongmaohua
Nweta PVC uwe aka
Ihe mkpuchi PVC nke a na-ewepu bụ ngwongwo polymer ndị a pụrụ ịtụfu, nke bụ ngwaahịa na-eto ngwa ngwa na ụlọ ọrụ mkpuchi nchebe. Ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ ụlọ ọrụ nri na-ahụ maka ngwaahịa a n'ihi na PVC gloves nwere ntụsara ahụ iyi, na-agbanwe iji ya, anaghị enwe ihe ọ bụla sitere na latex, ọ gaghị akpata mmeghachi ahụ nfụkasị.
Usoro eji emepụta ngwa ahia
Nchọpụta ihe dị ụfụ → iji ihe eji eme ihe ring na-akpali akpali → nyocha → filtration t defoaming nchekwa → nyocha → na ntanetị → na-akụ mmiri → na-agbasa → na-eme mkpọtụ → ịcha plastik → Mkpo ọkụ ma na-ajụ oyi → impregnation nke PU ma ọ bụ ntụ ntụ → na-eme mkpọtụ → na-ehicha → jụrụ Hemming → Mwepụta → Nyochapụta → Ntinye → Nyocha → Nkwakọ ngwaahịa → Nchekwa → Nnyocha → Mbupu na Mbupu.
Akporo na ngwa
Ọrụ ụlọ, kọmputa, kemịkal, mmiri, iko, nri na ihe nchekwa ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ụlọ ọgwụ, nyocha sayensị na ọrụ ndị ọzọ; otutu ihe eji etinye ya na ntinye nke ebe semiconductor, ihe ndi edoro edo edo di nma na ihe eji eme ya ma obu ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe ntinye aka di elu ma megharia ihe ngosi diski, ihe ndi ozo, mita ihe ngosi LCD, edoputara oria sekit, nkpuru ngwa anya, ulo oru, ulo ogwu, salons mara mma na ubi ndi ozo.
Ihe a na-atụfu mbupu PVC (3 foto)
Ebe dị ọcha dịka semiconductor, microelectronics, ihe ngosi LCD na ihe ndị ọzọ akpọrọ akpọrọ, ọgwụ, ọgwụ, injin, ihe oriri na ihe ọ ,ụ ,ụ, wdg.
1. Nkasi obi na-eyi, eyi ogologo oge agaghị akpata nsogbu anụahụ. Na-eme ka ọbara na-ekesa.
2. O nweghi ogige amino na ihe ndị ọzọ na-emebi ihe, anaghị enwekarị ihe na-akpata ahụ.
3. Ike tensile siri ike, iguzogide mkpị, ọ dịghị mfe imebi.
4. Akara ezi, nke kachasị dị irè iji gbochie uzuzu ka ọ ghara ịpụ.
5. Nnukwu nguzogide kemịkalụ na iguzogide ụfọdụ pH.
6. Ihe eji eji silicone eme ihe, ya na ufodu ihe ochichi, kwesiri ekwesiri imeputa ulo oru ihe omumu.
7. Ala nke nsị kemịkal dị n’elu ala, ala nke ion na obere ọdịnaya, dabara adaba maka gburugburu ụlọ dị ọcha.
Ngwaahịa a enweghị aka ekpe na aka nri, biko họrọ uwe ndị kwesịrị ekwesị maka nkọwapụta aka m;
Mgbe ị na-eyi uwe, ekwela akwa ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ, gee ntị na mbọ aka;
Ngwa ahia a bu ihe eji eme ihe otu oge; iji ya, biko were ya ka ihe mkpofu ọgwụ iji gbochie nje na-emetọ gburugburu ebe obibi;
Amachibidoro ya iwe iwe ọkụ dị ka ọkụ anyanwụ ma ọ bụ ụzarị ọkụ.
Ọnọdụ nchekwa na ụzọ
Ekwesiri ịchekwa ya n'ụlọ nkwakọba ihe dị jụụ ma kpọọ nkụ (nke ime ụlọ dị n'okpuru ogo 30 na iru mmiri dịkarịrị n'okpuru 80%) na shelf 200mm pụọ na ala
Oge nzipu ozi: Mee-07-2020